Duufaan cusub oo ku soo fool leh Xeebaha Gobolka Bari ee degaanada Puntland & Digniin la bixiyey | Allbanaadir
Duufaan cusub oo ku soo fool leh Xeebaha Gobolka Bari ee degaanada Puntland & Digniin la bixiyey
Duufaan cusub oo wadata Roob iyo dabeylo ayaa la sheegay inay ku soo fool leedahay degaanada xeebaha Puntland ee dalka Soomaaliya.
Duufaantan oo kasoo bilaabtay Waqooyiga Badda Hindiya ayaa lagu wadaa inay ku dhufato xeebaha dalka Cumaan saddexda maalmood ee soo socota, waxaana la sheegay in duufaanta cusub ay halis gelinayso Maraakiibta isaga kala goosha dalka Soomaaliya iyo dalalka Gacanka.
Goobaha ay saameyn doonto Duufaanta cusub ayaa la sheegay inuu ka mid yahay Gobolka Bari ee maamulka Puntland iyadoo ku soo fool leh 24-ka illaa 48-ka saac ee nagu soo aadan. Roobab dabaylo wata ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ka da’aan gobolka Bari ee maamulka Puntland.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in khaasaraha ka dhalan kara duufaanta la filaayo inay ka dhacdo xeebaha gobolka Bari ay noqon karto mid aan badnayn marka loo barbardhigo khasaarihii ka dhashay dufaantii Sagar ee dhawaan la wareegtay qaybo kamid ah gobolka geeska Afrika.
Dadka deegannadaasi ku dhaqan ayaa looga digay inay feejignaadaan iyadoo loo sheegay in duufaanta ay dhalin karto burbur gaar ahaan goobaha u nugul roobabka & degaanada u dhow xeebaha.
Qaramada Midoobay waxay sido kale sheegtay in deegannada digniinta hor leh laga soo saaray oo horraan ay ka jireen daadad saameeyay dadka.